१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १३:४८
बलेवा, १२ असोज । विश्वका साहसिक शिकारीको प्रमुख गन्तव्य ढोरपाटन शिकार आरक्षमा शिकारको समय शुरु भएको छ । हरेक वर्ष दुई याममा शिकार अनुमति दिइने आरक्षमा यो वर्षको पहिलो यामको शिकार गर्न खुला भएको हो ।
पहिलो समय (असोज–मङ्सिर) का लागि १० नाउर र छ झारलको शिकार हुनेछ । शिकार गर्ने कम्पनीहरुले एउटा नाउरको बढीमा रु. १२ लाख पाँच हजार र एउटा झारलको रु. नौ लाख २० हजार राजश्व विभागलाई बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गरेको बोलपत्र प्रक्रियाबाट चार कम्पनीले शिकारी पठाउने जिम्मा पाएकोमा हालसम्म तीन कम्पनीले विभागसँग सम्झौता गरी १० जना शिकारीलाई शिकारका लागि आरक्षमा पठाउन लागेको ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका प्रमुख अणनाथ बरालले जानकारी दिए ।
विभागले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत शिकार कम्पनी छनोट गरेर शिकार गराउने गर्दछ । बरालका अनुसार अहिलेको समयमा प्रतिनाउर शिकार गरेको रु. दुई लाखदेखि १२ लाख पाँच हजार र प्रतिझारल शिकार गरेको रु. एक लाखदेखि रु. नौ लाख २० हजारमा बोलपत्र स्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक वर्ष दुई पटक (असोज–मङ्सिर) र (माघ–वैशाख) मा विभिन्न शिकार एजेन्सीमार्फत ढोरपाटन शिकार आरक्षमा शिकार गर्नका लागि नाउर र झारलको कोटा निर्धारण गरी कोटाअनुसार विभिन्न ‘हण्टिङ एजेन्सी’मार्फत टेण्टर प्रक्रियाबाट शिकार गराउँदै आएको छ ।
हतियार, गोली र क्यामेरा विदेशबाटै लिएर आउने शिकारीले हतियार र गोलीअनुसार अनुमति दिएपछि मात्र शिकार आरक्षमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ । स्कटल्याण्डबाट शिकार खेल्न आएका सिमरोन के वारले ढोरपाटनमा शिकार गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताउँछन् ।